Chamberlain oo lagu wado inuu Caawa caafimaadka u maro Liverpool iyo Lambarka uu u xiran karo – Gool FM
(England) 30 Agoosto 2017. Alex Oxlade-Chamberlain ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Liverpool kaddib markii ay Reds iyo Arsenal ku heshiyeen qiimo dhan 40 milyan oo bound.
Gunners ayaa heshiis la gaartay Blues talaadadii, balse laacibka ayaa diiday inuu u dhaqaaqo Stamford Bridge maadaama uusan ka helin booska daafaca ay doonayaan inay ka ciyaarsiyaan.
Xiddiga qadka dhexe ee reer England ayaa iminka helay rajadiisa ahayd inuu ku biiro Liverpool isla markaana kaga ciyaaro booska uu jecelyahay ee qadka dhexe Kaddib Gunners oo go’aansatay inay iibiso laacibka maadaama uu diiday heshiis cusub.
Chamberlain ayaa lagu wadaa inuu tijaabada caafimaad caawa ku maro St George’s Park iyadoo uu tababarka la qaadanayo xulka England. waxaana lagu wadaa inuu u xirto Lambarkii Gerrard ee No. 8 isla markaana qalinka ku duugo heshiis 6-sano ah.
24-jirka ayaan heli doonin Lambarka 15-aad uu u xirto Gunners maadaama uu Daniel Sturbridge lambarkaa u xiran yahay Liverpool.
Sidoo kale ma heli doono Lambarada 26-aad iyo 11-aad oo uu soo xirtay barigii uu la joogi jiray Southampton waayo labadaba waxaa Liverpool u kala xirta xiddigaheeda cusub ee Robertson iyo Mohamed Salah.
Laakiin Chamberlain ayaa kooxda ka arrimisa Anfield u xiran kara Lambarka 8-aad kaa oo ah Lambar uu u xiran jiray 21-jirada Arsenal isla markaana uu iminka u xirto England.
Ma jiraan cid xiratay Lambarkaa tan iyo sidii uu uga tagay rugcadaagii Liverpool Steven Gerrard.
“Anigu kama cabsanayo Drinkwater.” . Tiemoue Bakayoko